Fadhiisinka Cusub Ee Kooxda Cali Khaliif Oo Shir Ka Furmay |
Fadhiisinka Cusub Ee Kooxda Cali Khaliif Oo Shir Ka Furmay
Balli-cad(GNN)Hogaamiyaha kooxda nabad diidka ah ee Khaatumo Cali Khaliif Galaydh, ayaa degmada Balli-cad kaga qayb galay shir lagu sheegay in goleyaasha kooxdu iskugu timid.
Waxaa shirka ka qayb galay goleyaal saddex ah oo lagu kala magacaabay golaha dhaqanka(Isimada), golaha xukumadda(Cali Khaliif) iyo golaha baarlamaanka, kuwaasi oo lagu sheegay in kooxda khaatumo ka kooban tahay saddexdaasi gole.
Shirkaasi Axadda maanta ka furmay degmada Ballicad waxaa hadal ka jeediyay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad jaamac iyo Cali Khaliif Galaydh, waxaanay sheegeen in halkaasi laga soo saari doono go’aammo kooxdku ku shaqayso sanadka soo socda.
Cali Khaliif oo wariyeyaashu waydiiyeen waxa u qabsoomay muddo hal sanno ah oo uu hogaaminayay kooxda Khaatumo ayaa waayay wax uu ku jawaabo maadaama aanay jirin wax waxtar ah oo uu bulshada u qabtay.
“ Inaanu su’aalo ka jawaabno ugumaanu talo galin laakiin waa run oo sanad waabay tahay intii Baarlamaankani dhisnaa, maamulkuna saddex sanno iyo dhawr bilood buu jiray, wixii noo qabsoomayna waa ognahay, halkaas baanuna ka sii kordhinaynaa oo uga sii dhawaanaynaa, wixii noo qabsoomi waayayna indhahaanu ku hayn, shirkanna wuxuu tilmaan ka bixin wixii qabsoomi waayay sidii loo toosin lahaa” ayuu yidhi Mr Galaydh.
Cali Khaliif ayaa bishii hore fadhiisinkiisa u bedelay degmada Balli-cad kadib markii Xaglotoosiye ka caydhiyay magaalada Buuhoodle oo uu yimid isagoo ka soo socdaalay Muqdisho. Waxa uu sidoo kale xaruntiisii Saax-dheer ka fadhiyi waayay ciidanka qaranka Somaliland oo fadhiga u diiday.